iingxaki ngeenjini (#3, okanye # # 3 & 4)
umbuzo iingxaki ngeenjini (#3, okanye # # 3 & 4)
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #851 by PAYSON
Sawubona, bekude ixesha elide ndihleli apha. Ndineengxaki ezimbalwa. Okokuqala, ndatshintsha iikhomputha. Emva koko, ezinye zeeplani ezizithandayo zikhuphela ngekhanda elimhlophe. Akukho mveliso, akukho ndawo yangaphakathi (i-cockpit okanye enye into.) Ayikwazi ukundiza ngaphandle kweso sixhobo. Okwesibini, andinakubonakala ngathi ndifumana iinjini kwi-multi-setup ukuze ndisebenze.ndi ndingasebenzisa nayiphi na injini okanye enye iinjinjini ngokungenasiphelo, kodwa faka i-3rd okanye i-3rd kunye ne-4th, umsebenzi ombini nje kuphela. Ndiyathanda ukuhamba ngeDash 7, kodwa kuphela iinjini ezikhohlo zigijima.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #852 by Dariussssss
Sidinga ulwazi oluninzi. Yiyiphi inqwelo, apho iFSX inguqu njl ... Ingaba inqwelo enombuzo inombuzo, ngaba uyayilandela njalo njalo ... Leyo ndlela yodwa yokunceda.
iinyanga 1 kunyaka 2 eyadlulayo #855 by PAYSON
Kubonakala sengathi ulahlekelwe yimpendulo yam yangaphambili. Ndikwenza konke ngeencwadi kunye / okanye "ukufunda-". Kuye nayiphi na indiza ethile, ndacinga ukuba ndathi, nayiphina inqwelo eneenjini ezingaphezulu kwe-2. Ndiyakwazi ukumisa ukulawula kwendiza ye-X-56 enye indlela, kwaye enye. Utshintsho ngalunye luchukumisa nje zonke iinjinjini ezihambayo okanye zonke iinjongo ezilungileyo ukuba zihlale zingenzi lutho ngelixa ezinye ziphazamiseka. Ndisebenzisa i-sfx ye-steam edition. Ndakuqhagamshelana nani ngenxa yokuba ndibe neengxaki ixesha elidlulileyo kwaye uncede kum. Ndixolisa ngokuthatha ixesha lakho kule meko, ndicinga nje ukuba umntu unokufumana ingxaki efanayo kwaye wayiphilisa. Akukho nto efana nayo kwi-FAQ yakho.
Ukuxolisa kwam, kunye nePAYSON
Unyaka we-1 inyanga ye-1 edlulileyo #869 by PAYSON
Ndiza kuzama kwenye indawo. Enkosi.
Unyaka we-1 inyanga ye-1 edlulileyo #870 by PAYSON
Whooooa !!! Ndifumene indlela echanekileyo yokwenza uhlengahlengiso lokusebenzisa ii-1 kwi-6. Kwakulula. Siyabonga ngoncedo :-(
Unyaka we-1 inyanga ye-1 edlulileyo #872 by Gh0stRider203
ukwabelana xa abanye bele ngxaki?
Unyaka we-1 inyanga ye-1 edlulileyo #873 by PAYSON
Ndiya kufuna ulwazi oluninzi. Yiyiphi inqwelo, apho i-FSX inguqu njl ... Ingaba inqwelo enombuzo inemibuzo, ngaba uyayilandela kwaye njalo ... Leyo ndlela yodwa yokunceda.OS, inkqubo yolawulo lwe-flight, njl njl.
Unyaka we-1 inyanga ye-1 edlulileyo #874 by PAYSON
Enyanisweni, yonke loo ngcaciso ayifuni. Nabani usebenzisa i-X-55 okanye i-X-56 Saitek Advanced system yokulawula i-flight kwaye bafumana ubunzima be-1 kunye ne-2 eneenjini, ndifumene oko ndicinga ukuba yonyango. Ndingayithumela kwangaphambili, kodwa kuthatha ixesha lokuphinda oku kulungiswa kwamaxesha e-20 ukubonisa kum isebenza. Iyasebenza. Vula nje "izicwangciso", uye kwi-throttle set up. Thabatha zonke izicwangciso, Xa isethingi se-throttle siphelile ngokupheleleyo, kwaye i-throttle ngokwayo isesikhundleni esingenasiphelo (qiniseka ukushiya ipini yokukhiya kwindawo yayo yangaphambili), hamba u-throttle yonke indlela eya evulekileyo, ebuyela embi, ukuvuleka ngokubanzi, uze ubuyeke, ungagqithisi njengesiqhelo, cwangcisa izicwangciso, uye kwinqwelo yakho ye-injini ye-4 kwaye uyinike uvavanyo. Ithemba liyakusebenza kuwe njenge-ez njengoko lenzelwe mna.
Unyaka we-1 inyanga ye-1 edlulileyo #875 by PAYSON
Oo, kukho iqela lokulwa neenqanawa zeWWII ezibonakalayo kwaye zinyamalale kummandla wase-Australia (YBBN).
Ixesha ukwenza page: 0.305 imizuzwana